Aogositra 3, 2011 amin'ny 2:00 aho
Tsy fantany mandra-ora vitsy taorian'ny fanavaozana no 404'ing aho nadika pejy. Mila ny hametraka ny APC thingy. Fa Izaho no manana W3 Total Cache mihazakazaka, izany no tsy toy ny Super Cache?
Aogositra 3, 2011 amin'ny 2:09 aho
Tsy afaka mahita ny antony mahatonga ny endriny vaovao nety 404 na inona na inona, misy no tsy misy fiovana izay natao nampihatra izay na inona na inona tao amin'io faritra.
Fametrahana APC dia hanatsara ny fampisehoana tena tsara anefa, fa izany no fampitandremana fotsiny, ary raha tsara ny fampisehoana eo anoloan'ny izay, tsy voatery hametraka izany (dia afaka manamarina ny fampitandremana foana)
momba ny W3 tanteraka cache, dia tokony hiasa, na izany aza tsy Transposh nanampy fampidirana ho azy (ohatra cache pejy invalidation eo amin'ny fandikan-teny fanovana) Angamba amin'ny ho avy.
Aogositra 3, 2011 amin'ny 2:33 aho
Hita mpandripaka sy indray abling W3 Total Cache fanamboarana ny 404 olana, izay nanomboka rehefa maraina ity fanavaozam-baovao Transposh.
Olana voavaha, fotoana torimaso! Misaotra noho ny valin-.
Aogositra 3, 2011 amin'ny 7:08 aho
Tsy misy ny fa 404 no miasa? azafady jereo ny toerana indray
Aogositra 3, 2011 amin'ny 12:05 am
Yout w3tc teny minimizer mahatonga Transposh tsy miasa, tokony hanaisotra transposh.js avy izany minimization, Angamba mila aho mba hijery izany
Aogositra 3, 2011 amin'ny 2:57 aho
Updata farany fahitana, nanamarika “Izahay tsy afaka mahita ny nanohana in-fitadidiana caching maotera, fametrahana misy afaka hanatsara ny zava-bitany. ” Inona no tsy mety ao aminy? Nahoana in 0.7.5 dia OK?
Aogositra 3, 2011 amin'ny 7:09 aho
0.7.5 nanana olana mitovy, fa tsy afaka mampahafantatra anao momba izany, izany no anisan'ny zavatra tena vaovao amin'ny 0.7.6 – milaza ianao fa ny fametrahana ny “tohanan'ny in-fahatsiarovana caching maotera” toy ny APC raha ny marina dia tena hevitra tsara ho an'ny Transposh
Aogositra 8, 2011 amin'ny 2:35 am
Misaotra noho ny pluge. Azo atao nanamarika ny Firenena Name toy ny teny anglisy. Tsy fantatro ny tena anaran'ny firenena toy izany dikan.
Aogositra 15, 2011 amin'ny 12:16 am
Misaotra ny vaovao dikan-plugin! Mety ho tsara ny atao mba handika ny lahatsoratra manontolo avy amin'ny Admin tontonana, izany no ta-hamonjy fotoana be dia be ho an'ny mpampiasa.
Aogositra 15, 2011 amin'ny 12:43 am
Izany no zavatra isika dia miasa amin'ny…
Septambra 3, 2011 amin'ny 2:47 aho
Araka ny lohany rakitra ampiasaiko karazana roa manaraka mahazo ny tanimanga:
<meta name="title" afa-po ="
<meta name="description" afa-po ="
lohateny afaka mahazo ny nadika tanimanga, fa ny famaritana hahazo fotsiny tany am-boalohany indray.. Inona no tokony hataoko? Misaotra anao?
Septambra 6, 2011 amin'ny 3:22 aho
Misaotra anao noho ny lehibe plugin.
milaza ianao fa ny fametrahana ny "manohana in-fahatsiarovana caching maotera" toy ny APC raha ny marina dia tena hevitra tsara ho an'ny Transposh.
Inona no dikan'ny hoe APC?
Ahoana ny fametrahana azy io.
Miala tsiny fa tsy fantatro loatra, hehe!
Misaotra betsaka noho ny manampy!
Septambra 20, 2011 amin'ny 11:35 am
Miala tsiny fa tsy mamaly aloha, izany fotsiny fampitandremana, mamela ny webmasters mba hanatsara ny toerana fampisehoana, APC dia mandroso PHP Cache, ary afaka Google ny poara-APC sy mahita ny tsipiriany rehetra ve ianao te, Transposh plugin mampiasa azy io mba hanatsarana fampisehoana ary tsy db ny fanontaniana rehefa alefa
Septambra 20, 2011 amin'ny 5:19 am
Maniry ny fahafahana mampiasa Widget amin'ny faritra Widget hafa, ankoatra ny amin'ny Kilonga faritra Widget. Amin'ny WordPress Theme Twentyten zaza aho amin 'ny Kilonga, faharoa sy ny faritra hafa Widget – amin'ny sasany Page iombonana mampiasa afa-tsy ny hafa Widget faritra. Fa indray mandeha ny Widget efa nataony tao amin'ny Kilonga Widget, Tsy afaka nanao ny hafa koa Widget faritra. : (
Septambra 20, 2011 amin'ny 11:24 am
Manaiky aho, izany dia endri-javatra izay tokony ho nanampy amin'ny ho avy.
Septambra 21, 2011 amin'ny 5:35 am
Ity takelaka ity dia amin'ny nizara fampiatranoana sy ny Tsy azoko antoka raha ho azo atao ny mampiasa ny op-fehezan-dalàna ary efa nahatsikaritra hatramin'ny farany ity fanavaozam-baovao no mitatitra fa Transposh “In-fahatsiarovana maotera caching tsy hita” ary ny sasany avy ny fandikan-teny dia izao tena patchy. Tsy misy iray hafa ny fampiasana APC na Memcached ho an'ny ry namana izay tsy afaka mametraka azy ireo?
Septambra 21, 2011 amin'ny 6:08 am
Izany dia fampahafantarana, izay azo maharitra nesorina tamin'ny alalan'ny fanerena ny X amin'ny nizara fampiantranoana misy kely ny atao, fa mangataka ny mpamatsy ny hametraka akory va ny safidy, misy tsy dia azontsika atao amin'ny izay
Donald Shane milaza
Septambra 22, 2011 amin'ny 1:29 aho
I teny amin'ny HOSTGATOR, poara-APC ihany no azo VPS sy be fikirizana lohamilina. Tsy misy ifandraisany amin'ny Shared fampiantranoana. Izy ireo tolo-kevitra amin'ny hametraka WP SUPER Cache. Dia WP Super cache Plugin ilaina ho an'ny Transposh plugin?
Novambra 11, 2011 amin'ny 1:12 aho
Eny, dia tena ilaina, toerana samy hafa ny caching fa koa mahatonga fanatsarana
Septambra 26, 2011 amin'ny 5:42 am
Amin'ny farany, Dia nataony ny tenako noho ny fanaintainana sakana ary nanontany ny miaramila Admin mba hametraka APC, izay nataony tsy misy Fuss, ary ankehitriny tsy Transposh fa ny toerana rehetra dia mihazakazaka toy ny “antsy voalavo”… tsara! Ny ankapobeny fanatsarana eo amin'ny toerana voalohany pejy entana-andro avy APC dia tena mampitolagaga ao fa efa tena mafy. Fa ankehitriny nidina avy 2.7 segondra amin'ny 1.3 segondra. Ary Transposh no manao ny asa mahazatra sy milalao tsara ny anjara amin'izany, Tsy ela pejy entana na inona na inona, toy izany tenim-pirenena hafa dia toy ny fifadian-kanina toy ny anglisy toerana misy anao. Misaotra betsaka.
Septambra 29, 2011 amin'ny 6:36 aho
Endrey ny afaka manampy “nofollow” ny rohy rehetra teny..
Oktobra 11, 2011 amin'ny 11:43 am
Tsy maintsy manova ny fehezan-dalàna izay miteraka ny rohy, ary ampio ny nofollow any, izany asany ao utils.php
Oktobra 3, 2011 amin'ny 6:34 am
Miala tsiny, fa Bing mpandika teny toa TSY miasa ao amin'ny Transposh plugin
Oktobra 11, 2011 amin'ny 11:44 am
Dia miasa eo amin'ny sy ho tonga toy ireo izay nanampy ny sasany izay anjara-fanompoana famerana, dia mila mahazo anao manokana AppID sy hisolo ny olona izay miseho ao amin'ny fehezan-dalàna ho an'ny izany hiasa flowlessly
Oktobra 12, 2011 amin'ny 12:48 am
Ary izay ao amin'ny fehezan-dalàna napetrako?
Oktobra 9, 2011 amin'ny 5:06 am
Hi, fisaorana noho izany tena tsara plugin, miasa lehibe, fa fanontaniana iray:
Ny WP sy ny TP toerana misy anao fiteny espaniola, amin'ny fandikan-teny amin'ny teny anglisy sy alemà miasa tsara. Raha (ohatra) Alemaina mpampiasa lahatsoratra tamin'ny teny alemà, ary mifamadika indray ny toerana misy anao espaniola, ny lahatsoratra nadika no hatao.
Na izany aza dia toa tsy mba ho afaka hanova ny mandeha ho azy tanana fandikan-teny ao amin'ny toerana misy anao teny.
ohatra:. http://mysite.com/my-post?edit=1 dia tsy hasehonao ahy va ny fandikan-teny sary masina (maitso, Amber, mavokely)
http://mysite.com/de/my-post?edit=1 dia mampiseho ny Transposh sary masina.
Azo atao ve ny hamerina hijery fandikan-teny mandeha ho azy ho toerana misy anao teny?
Misaotra ny eritreritrao!
Oktobra 11, 2011 amin'ny 11:46 am
Ny valiny dia eny, raha adika amin'ny toerana misy anao teny no afaka tokony ho afaka hanova teny, dia afaka hizaha toetra azy io eto an-toerana (Araka ny fanehoan-kevitra sasany nalefa amin'ny fiteny samihafa)
Oktobra 12, 2011 amin'ny 1:11 aho
maro fisaorana noho ny fandraisany fotoana hamaly!
Fotsiny aho tsy afaka manova teny ho an'ny toerana misy anao teny, Inona no azoko jereo hampandeha ny asa?
(Ny fandikan-teny mandeha ho azy ohatra:. avy any DE ny toerana misy anao ES asa fa miaraka amin'ny vokany mahatsiravina)
Oktobra 13, 2011 amin'ny 5:21 am
Hitako fa noho ny antony tsy mazava ho ahy, eo an-tanako toerana ny "data-srclang" toetra ho ny TP androm tenifototra no tsy ampy. Ohatra. ao amin'ny ny toerana:
<span id="tr_169" class="tr_" data-orig="Geschirrspülmaschine" angona-source ="0" data-token="R2VzY2hpcnJzcMO8bG1hc2NoaW5lIHZvbiBXaGlybHBvb2w,">Fanasana vilia</androm>
ampitahaina amin'ny fanehoan-kevitra momba ity espaniola toerana
<span id="tr_3" class="tr_" data-orig="¿Y en que parte del código lo pongo" data-srclang="es" angona-source ="0" data-token="wr9ZIGVuIHF1ZSBwYXJ0ZSBkZWwgY8OzZGlnbyBsbyBwb25nbw,,">Ary, Inona no ampahany amin'ny fehezan-dalàna tsy maintsy mamerina izany</androm>
Na izany aza ny lahatsoratra amin'ny zanako-toerana manana ny lahatsoratra tp_language Meta / fanao saha voafaritra ho "de".
Novambra 11, 2011 amin'ny 12:16 aho
Izany dia namorona ny plugin indray mandeha ny fanehoan-kevitra dia nohariana araka ny teny nomena interface tsara, tokony hahatonga ny safidy mba hametraka ny fanehoan-kevitra ao amin'ny backend teny amin'ny ho avy dikan-.
Oktobra 11, 2011 amin'ny 3:34 aho
Hi Atolotro & Terence,
Efa nametraka ny farany Transposh dikan 0.7.6, ary ny manana fahadisoana:
– Anaram-boninahitra rehetra dia tsy azo adika
– Afa-po sy ny faritra hafa (karazan-tsakafo ..) indraindray dia adika , indraindray tsy.
– Description & Keywords tsy azo adika koa.
– Rehefa tsindrio raha Transposh mametraka, hita: “Izahay tsy afaka mahita ny nanohana in-fitadidiana caching maotera, fametrahana misy afaka hanatsara ny zava-bitany. Jereo Transposh FAQs” . Inona no olana? Mampiasa W3 aho Total Cache plugin for caching.
Ankehitriny, Ahoana no azoko atao?
Esory W3 Total Cache sy hametraka APC?
Hametraka taona Transposh dikan?
Na fomba hafa?
Mba ampio aho mba hamaha ity olana ity tsikelikely!
Oktobra 11, 2011 amin'ny 11:49 am
Ny fampitandremana izany mihitsy fa, fampitandremana, dia afaka soa aman-tsara tsy miraharaha izany, na hamaky teny sy hiasa eo, Tsy hanala W3TC, mametraka APC na memcached raha toa ka azonao atao, Tsy manambany…
Izany no fanampiana azoko omena anao amin'ny fanazavana nanome, mirary anao ho tsara vintana
Oktobra 11, 2011 amin'ny 7:44 aho
no mampiasa io satria plugin 1 taona.
nandika fijanonana ohatra ao amin'ny 2 faharoa satria 2 andro, raha Izaho maniraka ny teny na sokafy ny toerana. Tsy maintsy miandry 5 minitra ary handika lahatsoratra sasany dia mijanona indray ary mamerina izany
hita toy ny mandika Google API haka amin'ny spam ny IP na plugin API antitra ankehitriny?
azonao jereo izany pls?
misaotra, na amin'inona.
Oktobra 11, 2011 amin'ny 11:51 am
hametraka firebug, na mampiasa fitaovana Chrome serasera, hijery ny tambajotra kiheba ary afaka mahita raha ny IP voasakana, Tena tsy afaka mijery raha ny IP voasakana…
Novambra 1, 2011 amin'ny 12:38 am
Tsy fantatro hoe nahoana, Transposh intsony fa miasa eo an-tanako toerana… Izay tokony hatao? misaotra Cristina
Novambra 10, 2011 amin'ny 11:34 am
Miala tsiny mikasika ny tara valin-, azafady hisolo ny transposh.js rakitra iray mitondra ny anankiray avy io toerana http://transposh.org/wp-content/plugins/transposh/js/transposh.js
Ny dika vaovao ho ela hamaha ity amin'ny ara-dalàna vaovao
Novambra 15, 2011 amin'ny 11:23 aho
…rehetra izao, misaotra.
…ny zava-misy fa amin'ny sasany mbola hevitra ny toerana (toy ny Widgets eo amin'ny an-trano) ny [TP no_translate ="ary"][/TP] Tsy miasa!
Claudio fiarovana milaza
Novambra 4, 2011 amin'ny 7:49 am
tsy miasa ho ahy eather… Nanandrana mihitsy aza aho hamafa fandikan-teny mandeha ho azy rehetra.. fa wasen't ampy…
Noho izany dia voafafa misy SQL latabatra mifandraika amin'ny Transposh sy reinstalled.. fa na inona na inona.
Rehefa miezaka ny mandika, ny fandikan-teny fisotroana mivaingana ny, sy afa-po tsy hahazo nadika…
Ny hany zavatra izay miasa, dia ny boky fampianarana teny…
Novambra 4, 2011 amin'ny 8:01 am
Efa nanao ny mifanohitra ny zavatra tokony ho nataonareo, anyhow – izany dia mbola mandika fa ny Google manao tena sarotra fetra.
1. Manual fandikan-teny
2. Jereo ny soso-kevitra ao amin'ny twitter (Temp vahaolana)
4. Hiandry ny fanafahana avy izay mahavaha izany
Novambra 4, 2011 amin'ny 8:05 am
no azo atao mba hamerenana dika teo aloha avy eo?
Novakiko tao plugin Admin fizarana izay efa mba mangataka aminareo, mampiasa ny fanalahidy manokana…
Novambra 4, 2011 amin'ny 8:16 am
Ny hamerina indray tsy ho afa-milina fandikan-teny, dia afaka hifandray ahy mivantana
Novambra 5, 2011 amin'ny 10:13 aho
Afaka manome vaovao azafady rehefa dika vaovao ny plugin dia ho hita.
Amin'izao fotoana izao Bing sy Google manana fiovana politika sy ny fandikan-teny tsy miasa.
Avy 1 Desambra Google dia hanome karama ihany no dikan-fanompoana. Dia ny plugin hamela hampiasa azy io?
Novambra 5, 2011 amin'ny 10:45 aho
Ny dikan vaovao dia ho hita tsy ho ela, teo anatrehan'ny Google fe-potoana.
Bing dia efa nanolorana azy ho amin'ny svn, Google vahaolana ho ela.
Misy tweaks izay hahafahan'ny na hiasa ao amin 'ny dikan-.
Ny Google API karama dia ho hita afa-tsy raha misy olona manome ahy tamin'ny fanalahidy ny fitiliana, taratasy fanomezam-pahefana ny Google dia mety hamaha ny olana ho an'ny olon-kafa rehetra.
Manantena aho fa ny fanontaniana dia namaly.